Vatana, fo sy saina ary fanahy: iza no omen-danja? – Blaogin'i Voniary
Ny kolontsaina malagasy, ny fivavahana isan-karazany na tandrefana na tantsinanana dia samy manaiky fa vatana, fo sy saina ary fanahy no maha olona ny olona iray. Saingy iza amin’izy ireo no omen-danja amin’ny fiainana andavanandro mba hananana fiadanana anaty ka afahana mizara fiadanana amin’ny manodidina? Tantara iray no zaraina amintsika androany mahakasika ny maha iray ny vatana, fo sy saina ary ny fanahy. Mamakia finaritra ary.
Ilay mpanjaka siberiana sy ireo vadiny efatra
Ilay mpanjaka sy ireo vadiny efatra
Indray andro hono, nisy mpanjaka siberiana nanana vady efatra. Teo ambavahaon’ny fahafatesana iny indrindra izy no niantso ny vadiny fahaefatra, izay tanora indrindra no sady tiany mihoatra noho izy telo hafa. Hoy izy hoe: “Ry Malala, indro aho efa mby handao ity tany ity. Indry no tiako raha samy vadiko ka moa manaiky ve indry hiaraka amiko ho any ankaotra?”. Namaly ramatoa vady fahaefatra hoe: “Tompoko, fantatro fa tia ahy tokoa ianao sady nikarakara ahy fatratra. Nandany fotoana sy vola aman-karena nampifalifaliana ahy, saingy miala tsiny aho raha handà fa tena tsy vitako ny hanaraka anao any amin’ny toeran-tsy fantatra”.
Nalahelo ny mpanjaka nefa nanao anakam-po hoe : “raha tsy nanaiky izy, hanaiky kosa ny vadiko fahatelo.” Io vadiny fahatelo io no tanora manarakaraka, sady tiany ihany koa. Nanontaniany tahaka ilay vadiny fahaefatra ihany koa izy nanao hoe: “ry vadiko, indro aho efa mby handao ity tany ity. Indry no anisan’ny tiako aminareo efatra andefimandriko. Koa moa manaiky ve indry hiaraka amiko ho any ankoatra?”. Namaly ramatoa vady fahatelo hoe: “Tompoko, fantatro tokoa fa izaho no tianao manaraka aminay vadinao. Tsapako hoe na tsy izaho aza no safidinao voalohany dia nanokana fotoana sy nanome ahy vola sy harena maro ianao. Saingy miala-tsiny aho raha handà fa tena tsy vitako ny hanaraka anao any amin’ny toeran-tsy fantatra.”
Nanomboka kivy ny mpanjaka saingy mbola nanana fanantenana fa tsy handà azy kosa ny vadiny faharoa izay efa somary antitrantitra nefa hitany fa tia azy mihoatra noho izy roa tanora. Rehefa nanontany ito farany nefa izy dia mbola tsia ihany koa ny valin-teny azony.
« Tsy vitako ny hanaraka anao any amin’ny toeran-tsy fantatra
Farany indrindra, nampiantso ny vadiny voalohany ny mpanjaka, izay efa antitra raha oharina amin’izy telo hafa saingy io vadiny io no efa nahafantatra azy fony izy mbola tanora sy mbola tsy nanana na inona na inona. Akory ny hagagany raha nanontany an-dramatoa tompon-toerana izy, izay zary nahilikiliny sy zara fa nahazo sombiny tamin’ny harem-beny sy ny volany, fa izy irery ihany no nanaiky. Tsy be fanontaniana, tsy be kihana. Nanaiky tsotra fotsiny sy am-pitiavana.
Samy mila fikarakarana ny vatana, ny fo sy ny saina ary ny fanahy
Asa raha tonga dia takatrao fa ny vatana no oharina amin’ny ilay vady fahaefatra. Mandany fotoana sy vola isika ikarakarana azy sy ampifaliana azy (sakafo, akanjo, fahafinaretana hita maso sy azo tsapain-tanana sns…) saingy rehefa eo ambavahadin’ny fahafatesana, tsy afaka anaraka antsika izy fa hijanona ao am-pasana.
Faharoa, ny fo (faniriana, fietsem-po, fahafinaretana) kosa no oharina amin’ny ilay vady fahatelo. Mampientana, mampihetsika, manome afo sy hery hanaovana zavatra izy, saingy mora kivy sy miovaova ihany koa. Ary raha izy no arahina, dia tsy hisy zavatra aharitra eo amin’ny fiainana. Manome lanja azy nefa isika amin’ny fiainana andavanandro (fialam-boly, safidy atao, sns) saingy tadidio fa teboka amam-paingo ny tora-po sy ny toe-po.
Fahatelo, ny saina no oharina amin’ny vady faharoa. Tsy be fihetsiketsehana tahaka ny fo izy ka tsy dia voakarakarantsika loatra izy io fa toa raisintsika ho adidy ny fotoana sy vola laniana aminy (fianarana, famakiana boky, fisokafana amin’ny hevitra sy kolontsaina hafa). Izy nefa no manampy antsika hiatrika ny ady amin’ny fiainana, mampandanjalanja, mijery ny mety sy ny tsy mety amin’ny toe-javatra miseho.
Fahaefatra farany, ny fanahy no oharina amin’ny ilay vady voalohany: io no maha olona ary maha tokana ny olona tsirairay. Raha ny tena marina, kamo isika mikarakara azy io noho izy malefaka, tsy hita maso, tsy be fiavy sady tsy be taraina. Kanefa tadidio fa izy irery ihany no hanaraka antsika rehefa hiditra eo ambany rangolahy isika.
Omeo laharam-pahamehana ny zavatra manan-danja
Raha izay ary no izy: iza no tokony omen-danja kokoa: ny zavatra mora lo sa ny aharitra mandrakizay? Tsy miresaka antokom-pivavahana sanatria fa tena lojika tsotra. Hoy ny zoky iray izay fony izahay nilasy: “dia ho sahinao ve nohon’ny fahafinaretana fohy dia fohy anio ny hiditra fatiantoka be dia be atsy aoriana?” Amin’ny mpitantam-bola, aleony mitsitsy sy manangona mba hiteraka zanany ny vola toy izay lanilany fahatany. Hoy ny Ntaolo hoe “mahaiza mitsinjo ny vody andro merika.” Hoy ihany koa ingahy Stephen COVEY, andrarezina amin’ny literatiora miresaka ny fahombiazana: “ataovy laharam-pahamehana sy voalohany izay zavatra manan-danja”.
Tsy midika akory izany fa tsy tokony hikarakara vatana sy tsy hiala voly intsony. Saingy omeo ny anjara toerana sahaza azy avy ny asa aman-draharaha hatao isan’andro.
Raha mandany adiny efatra isan’andro ve aho hikarakarako ny endrika amam-bikako kanefa ny tokantranoko etsy an-daniny tavela: manontany tena foana ihany aho sy ny fanahy ao anatiko hoe “mety ve izany?”
Ilaina ve ny mandany ora roa aho hidirako amin’ny tambazotra sosialy toy ny facebook sy ny Instagram ary ny twitter, kanefa zara fa tafaresaka amin’ny zanako sy ny vadiko ny momban’ny tontolo andron’izy ireo?
Eto am-pamaranana, manasa anao sahady hijery ny lahatsoratra manaraka ity, izay hikasika ny fikarakarana mahomby sy araka ny onony azo atao amin’ny vatana, ny fo sy ny saina ary ny fanahy. Isaky ny tapa-bolana no hivoaka ireo ary fizarana ataon’ny olona no hotaterina aminao etoana. Mamakia finaritra ary dia mirary soa indray
fanahy no olona, fiadanam-po, fiadanana anaty, fikarakarana ny fanahy, ny fanahy no maha-olona, stephen covey